पार्टीभित्रको विवादले प्रधानमन्त्री ओलीको ओलाङचुङगोला र घुन्सा भ्रमण कार्यक्रम रोकियो « Sajhapath.com
पार्टीभित्रको विवादले प्रधानमन्त्री ओलीको ओलाङचुङगोला र घुन्सा भ्रमण कार्यक्रम रोकियो
ताप्लेजुङ मंसिर २ । पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ताप्लेजुङका हिमाली गाउँ ओलाङचुङगोला र घुन्सा भ्रमण कार्यक्रम स्थगित भएको छ । उनले घुन्साका स्थानीयलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसमेत थियो ।
सत्तारूढ नेकपामा बढ्दै गएको विवादका कारण प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले भ्रमण स्थगन गरेको हुन सक्ने नेकपाका जिल्ला नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले ५ गते शुक्रबार नेपाल–चीन सिमाना टिप्ताला भन्ज्याङ र ओलाङचुङगोलाको सीमा सुरक्षा पोस्ट अवलोकन तथा घुन्सा फाउन्डेसनको भवन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । भ्रमण तयारीका लागि सदरमुकाम फुङलिङबाट मंगलबारै ओलीका समर्थक तथा सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ जाने तयारीमा थिए ।
फुङलिङ नगरपालिकाप्रमुख छत्रपति प्याकुरेलको अगुवाइमा जान लागेका सयौं कार्यकर्ता ट्याक्सी काउन्टरबाटै फर्किएको यात्राको समन्वय गरिरहेका गोपाल न्यौपानेले बताए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कार्यक्रम स्थगनको मौखिक जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्र चापागाईंले जानकारी दिए ।
प्रचण्डको प्रश्न-१९ पृष्ठको दस्तावेज कसले जन्मायो ?
काठमाडौँ,असार १३ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक परिवर्तन अनुसारको व्यवस्था केपी ओलीले
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, नेकपा एसबाट को – को भए मन्त्री ?
काठमाडौं,असार १३। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार साँझ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका
विदेशका नेपालीलाई आउँदो निर्वाचनमै मतदानको व्यवस्था मिलाऔँ : सांसद पौडेल
काठमाडौँ,असार १२ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारले
माओवादी छोडेर स्वतन्त्र बसेका दाङका जीवन गौतम एमाले प्रवेश
दाङ,असार १० । नेकपा माओवादी केन्द्रका दाङ जिल्ला ईञ्चार्ज जीवन गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका